‘म यस्तो पुरुषलाई भेट्न चाहन्छु, जसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होस्’ — Imandarmedia.com
आज : २०७५ जेठ ९ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
‘म यस्तो पुरुषलाई भेट्न चाहन्छु, जसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होस्’
महिला यौनकर्मीबारे हामीले कतै न कतै सुन्दै आएका छौं । तर, अहिले संसारमा पुरुष यौनकर्मीहरु पनि बढेको विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । धनाढ्य परिवारका महिला सदस्यहरुले यौन प्यास मेटाउनका लागि पुरुष यौनकर्मीको सेवा लिने गरेको पाइन्छ ।
विशेषगरी विकसित मुलुकहरुमा पुरुष यौनकर्मी महिलालाई सेवा दिँदै आएका छन् । नेपालमा पनि केही संख्यामा पुरुष यौनकर्मी भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै ब्रिटेनकी ४२ वर्षीया शरलोटले पुरुष यौनकर्मीको सेवा लिएकोमा भन्छिन्, ‘केही वर्षअघि मैले पहिलोपटक पुरुष यौनकर्मीबाट यौन चाहना पुरा गरेकी थिएँ । म एउटी एकल महिला र आमा पनि भएकाले पुरुषसँग बाहिर गएर समय बिताउनु पहिले मलाई पनि ठीक लाग्दैनथ्यो ।’
उनले निशुल्क सेक्सको प्रस्ताव पाइरहँदा पनि किन त्यसलाई खरिद् गरेरै प्राप्त गर्ने विचार गरिन् भन्ने प्रश्नमा यस्तो जवाफ दिइन् , ‘आफूलाई कोही मानिस मन नपर्दानपर्दै पनि ऊसँग रात बिताउनाले केबल असमझदारी मात्र पैदा हुन्छ । मलाई त्यस्तो दबाब सहनु थिएन ।
त्यसैले मैले पुरुष यौनकर्मीलाई भाडामा लिने निर्णय गरेँ । यस्तो सेवा लिँदा हामी दुवैलाई एकअर्काको चाहना बारे स्पष्ट थाहा हुन्छ । आजभोलि धेरै महिला आफ्ना पार्टनरले ओछ्यानमा भने बमोजिम क्रियाकलाप नगरेपछि घरबाहिर गएर यस्ता सेवाबाट सन्तुष्टि लिने गर्छन् ।’
उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘ऊ आफ्नो पेशामा धेरै राम्रो थियो । त्यो अनुभव मलाई अनैतिक लागेन । हामीबीच प्रेम थिएन तरपनि मलाई एक प्रकारको सुख र आनन्दको अनुभूति भयो । म आफूलाई सन्तुष्ट पार्नकै लागि त्यहाँ गएको मलाई आभास भयो ।’ दुई घन्टा हुनासाथै उनले १० हजारका दरले पैसा तिर्नु परेको बताइन् ।
विश्वमा यो चलन कत्तिको फस्टाइरहेको छ भन्नेमा अहिलेसम्म कुनै तथ्याङ्क नभएपनि यसबारे जानकारहरुले यस्तो चलन बढ्दै गइरहेको बताएका छन् ।
यौनविद् एड्रियन सैपेटीका अनुसार हामीले सोचेभन्दा यो व्यवसाय धेरै व्यापक भइसकेको छ । यसको वास्तविक सम्बन्ध महिलाहरुको हातमा आएको ताकतसँग रहेको उनले बताए ।
पहिले केबल पुरुषहरुले मात्र आफ्नो बल प्रयोग गर्थे तर अहिले महिलाका हातमा पनि उत्तिकै पैसाको ताकत भएका कारण उनीहरु आफूलाई सन्तुष्ट गराउन सक्षम भइसकेका छन् ।
यस्ता महिलाहरु कसरी सेक्सका सेवा लिन्छन् ? कस्ता किसिमको सेवा बढी रुचाउँछन् ? पुरुष यौनकर्मीबाट कस्तो अपेक्षा राख्छन् र शारीरिक र यौन सुरक्षाका लागि कस्तो उपाय अपनाउँछन् ? भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ पाउन प्राध्यापक सारा किंगस्टनले ‘वुमन हु बाई’ भन्ने नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गरेकी छन् ।
यस प्रोजेक्टलाई सफल पार्न ब्रिटेनमा त्यस्ता महिलाको खोजी गरियो जसले सेक्स खरिद गर्ने गर्छन् । लैंकस्टर विश्वविद्यालयमा अपराध विज्ञानकी प्रोफेसर किंगस्टन भन्छिन्, ‘यस सम्बन्धी इन्टरनेट र पत्रिकामा राखिने त्यस्ता ६३ प्रतिशत विज्ञापनले महिला ग्राहकलाई मात्र केन्द्रीत गराएको हामीले पत्ता लगायौँ ।
यस्तै अध्ययनबाट हामीले सन् २०१२ मा पुरुष यौनकर्मीको सङ्ख्या ५,२४६ बाट अहिले यो भन्दा तीन गुना बढी १५,७३२ भइसकेको जानकारी पनि हासिल गरेका छौं ।’
शोधकर्ताका अनुसार महिलाहरु इन्टरनेटमार्फत विभिन्न एजेन्सीको सहयोगले त्यस्ता पुरुषको खोजी गर्ने गर्छन् । अझ लन्डनमा महिला ग्राहककै लागि मात्र खुलेको बेश्यालय समेत भेट्टाइएको थियो जुन अहिले बन्द भइसकेको छ ।
सारा किंगस्टन भन्छिन्, ‘हाम्रो अध्ययनमा हामीले सबै उमेर समूहका महिलाहरु पायौँ । विशेषगरी त्यस्ता एकल महिलाहरु जो आफ्नो काममा सफल छन्, टन्नै पैसा कमाउने गर्छन् र जसका छोराछोरी पनि ठुल्ठुला भइसकेका हुन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा महिलाका आवश्यकता भिन्नै हुन्छन् । आफ्नो जोडीसँग समयको कमी भएकाले उनीहरुको चाहना र सन्तुष्टी अपूरै रहेका हुन्छन् ।’
कुनै अन्जान व्यक्तिसँग एक रातका लागि मात्र सम्बन्ध बनाउन यसरी एजेन्सीमार्फत सेक्स खरिद गर्नु महिलाहरुका लागि सबैभन्दा सुरक्षित तरिका हो । यसमा पूर्व ग्राहकले गर्ने टिप्पणी पनि धेरैका लागि सहयोग हुने गरेको छ । कतिपय एजेन्सीहरु त्यस्ता पुरुषलाई ग्राहक महिलासँग भेट समेत गराइदिन्छन् र कन्डमको प्रयोगमा बढी जोड दिने गर्छन् ।
बार्सिलोनामा महिलालाई सेक्स सेवा प्रदान गर्ने गरेका ३० वर्षीय क्रिस्टियन भन्छन् , ‘यो एउटा गोप्य र रहस्यमय संसार हो । यहाँ अधिकांश ग्राहकहरु आफ्नै मर्जीले विभिन्न एजेन्सीमार्फत आउने गर्छन् ।
महिला ग्राहकका फोन गोप्य नम्बरबाट आउने हुनाले उनीहरुका बारेमा पत्ता लगाउन धेरै कठिन हुन्छ । यो एउटा अत्यन्तै गोप्य प्रक्रिया हो ।’ क्रिस्टियन एकवर्षदेखि यो पेशामा लागेका हुन् । उनले आफ्ना सेवाका लागि प्रतिघन्टाको १८०० देखि ३७७० रुपैँयासम्म लिने गरेको बताए । उनका ग्राहकमा तीस वर्ष देखि ५५ वर्षका महिला हुने उनले बताए ।
कम उमेरका महिला उनीहरुलाई दबाब नहोस् भनेर आउने गर्छन् भने बढी उमेरका महिला आफ्ना जोडीबाट असन्तुष्ट भएकाले सेवा लिन आउने गरेको उनले बताएका हुन् ।
उनका अनुसार कुनै पनि महिला पुरुष यौनकर्मीकहाँ आउँदा साधारण सेक्स चाहदिँनन् । क्रिस्टियनले भने, ‘आफूले आफ्नो सीमा बताएपनि उनीहरुलाई सन्तुष्ट पार्नु नै हाम्रो पेशा हो । त्यसैले हामीले उनीहरुको आवश्यक्तालाई कुनै पनि हालतमा पूरा गर्नै पर्छ । यो एउटा हृदयहिन संसार हो जुन केबल पैसाले मात्र चलेको हुन्छ ।’
त्यस्तै २४ वर्षीय इवान पनि मेक्सिकोमा यौनकर्मीका रुपमा काम गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता ग्राहकहरु एकदमै धनी हुन्छन् जसलाई हामी स्पा वा स्पोर्टस क्लबमा एकान्तमा भेट्न जाने गर्‍छौं ।
कतिपयले ३५ हजारदेखि ५० हजार सम्मको प्रस्ताव राख्ने गर्छन् ।’ उनका अर्का साथी भन्छन्, ‘कतिपय महिलाका पति बूढा र कुरुप भइसकेका कारणले पनि हामीकहाँ आउने गर्छन् । आफ्नो पतिमा सबै आकर्षण समाप्त भइसकेपछि उनीहरु हामीबाट आवश्यक्ता पूरा गर्छन् र हामीसँग यसबारेमा कुरा गर्ने गर्छन् ।’
तर, यस्ता सबै क्रियाकलाप सेक्ससँग मात्र जोडिएको हुँदैन । कतिपय महिलाले आफ्ना ठूलाठूला पार्टीमा उनीहरुलाई प्रेमी बनाएर लग्ने गरेको समेत उनीहरुले बताए । त्यस्तै धेरै माहिलाहरु कामुक मालिशको मज्जा लिन मात्र पनि आउने गरेका छन् ।
ब्रिटेनमै यस्तो मसाजको सेवा प्रदान गर्ने ‘इन्टिमेसी म्याटरस्’ नामक कम्पनी खोलिएको छ जसलाई कोलिन रिचर्डले चलाइरहेका छन् । उनका अनुसार यसरी सेवा प्रदान गर्नुअघि ग्राहकको आवश्यक्ताबारे बुझ्न २५ प्रश्न भएका प्रश्नपत्र दिइन्छ ।
यस्ता स्थानमा आउने अधिकांश ग्राहकहरुले शारीरिक सम्बन्ध नराखी यौन सन्तुष्टी पाउन चाहको रिचर्डले बताए । उनका अनुसार यस प्रकारको मसाज लिन अर्जेन्टिना, क्यानडा, अफ्रिका, साउदी अरब जस्ता देशका सेलिब्रेटी र राजकुमारी, पोल डान्सर र महिला यौनकर्मी समेत आउने गरेका छन् । मनलाई शान्त पार्न सेक्स सबैभन्दा उपयुक्त उपाय भएको उनको भनाइ रहेको छ ।
२०७४ मंसीर १२ गते प्रकाशित
पेटको बोसो सधैंका लागि हटाउने १० घरेलु तरिका
खानामा टमाटर प्रयोग गर्दा के-के फाइदा के-के बेफाइदा ?
बच्चा जन्मिएपछि महिला किन मोटाउँछन् ? कसरी घटाउने शरीरको तौल ?
महत्वपुर्ण स्वास्थ्य टिप्स: मसल्स बनाउन के खाने ?
यि कस्ता घरबेटी ? जसले महिलासँग भाडाको साटो सेक्स माग्छन्…